စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား (Appropriate Language in Business Situations) - အပိုင်း (၃) - Myanmar Network
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား (Appropriate Language in Business Situations) - အပိုင်း (၃)
Posted by Language Republic on October 24, 2011 at 11:13 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မှန်ကန်သော အသုံးအနှုန်းများနှင့် မှားသောအသုံးအနှုန်းမျာ အတွက် ဥပမာများ နှင့်ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုများ - ဥပမာ စကားပြော (၂)
(Examples and Analysis of Correct and Incorrect Usage - Example Conversations 2)
အခုတစ်ခါ ဒီအဆောက်အဦး တစ်ခုတည်းမှာပဲ အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေ့လယ်စာ စားချိန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tom: ဟယ်လို Frank. ကျန်းမာပါရဲ့လား? (Hello, Frank. How do you do?)
Frank: အေး၊ ကောင်းပါတယ်။ မင်းရော နေကောင်းရဲ့လား? (Well, I’m fine. How are you?)
Tom: ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုလို မေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို
ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကူအညီတောင်းလို့ ရနိုင်မလား မသိဘူး။ ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာ အချိန်များနည်းနည်းလောက် ပေးနိုင်ပါမလား။ (I’m fine. Thank you very much for asking. I was wondering if you might be able to help me withaproblem. Do you think you might have some time for me later today?)
Frank: သေချာတာပေါ့ Tom ရာ။ ငါက မင်းရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပဲဟာ။ ဟေ့ ဒါနဲ့ ညက ကစားပွဲကို မင်းဘယ်လိုမြင်လဲ။ (Sure Tom. I’m your best friend. Hey, what did you think of the game last?)
Tom: ကျွန်တော်ကတော့ အသင်း ၂-သင်းစလုံးဟာ စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်
ကစားသွားတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ (Oh, I thought that both of the teams played extremely accurate and well executed games.)
Frank: အရမ်းမိုက်တယ် လို့ မင်းပြောချင်တာလား? (You mean they both were hot.)
Tom: အဲဒီလို ပြောလို့လဲ ရနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် (I guess you could say that.)
Frank: ဒါနဲ့ စကားမစပ၊် ဒီနေ့ မင်း ဘာဖြစ်နေတာလဲကွာ။ (By the way, what’s the matter with you today?)
ဒီစကားပြော (conversation) ရဲ့ အမှားတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဘာသာစကားလုပ်ငန်းအမှား (Language Function Mistakes)
ဒီစကားပြောဟာ နေ့လယ်စာစားချိန်မှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Tom အနေနဲ့ မေးစရာလေးတစ်ခု ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ရင်းနှီးတဲ့ စကားပြောအတွက် သူ့ရဲ့အသုံးအနှုန်းတွေဟာ ယဉ်ကျေးလွန်းနေပါတယ်။ နောက်ဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မိတ်ဆက်နေတာမဟုတ်ပဲ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်နေခြင်းသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် “How do you do” (ကျန်းမာပါရဲ့လားခင်ဗျား)ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းဟာ လုံးဝကို မသင့်တော်ပါဘူး။
နယ်ပယ်အမှား (Domain Mistakes)
Tom နှင့် Frank ဟာ နေ့လယ်စာအတူတူစားနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂-ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ရင်းနှီးတဲ့ ဆွေးနွေးမှုမျိုးမှာဆိုရင် ဥပမာစကားများ (idioms) သုံးချင်းဟာ တကယ့်ကို သဘာဝကျပါတယ်။ မေးခွန်းမေးခြင်းသည် ဒီစကားပြောရဲ့ နယ်ပယ်ထဲမှာ အသေအချာကို ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အရင်ညက အသင်း ၂-သင်းရဲ့ကစားပုံကို စာစကားနဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်း (formal analysis) - ၂ သင်းစလုံး စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကစားသွားခဲ့ပါတယ် (“Both of the teams played extremely accurate and well executed games”) - သည် ဒီအခြေအနေအတွက် ဆိုရင် မလိုအပ်ပါ။
သတ်မှတ်ချက်အမှား (Register Mistakes)
Tom နဲ့ Frank တို့ဟာ သူတို့ ၂-ဦးရဲ့ နေ့စဉ်ရင်းနှီးတဲ့ ဆက်ဆံရေးကြောင့် စကားကို ရင်းရင်းနှီးနှီး ဒဲ့ဒိုးပြောသင့်ပါတယ်။ နေ့လယ်စာစားချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကြောင့် ပိုပြီးတော့တောင်မှ စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရေးကြီးမှုအမှားများ (Urgency Mistakes)
ပြောနေတဲ့ အကြောင်းအရာသည် သိပ်အရေးမကြီးပါ။ သူငယ်ချင်း ၂-ယောက်ဟာ နေ့လယ်စာစားချိန်မျာ ၂-ယောက်အတူ အချိန်ကိုဖြုန်းနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းမေးခြင်းနှင့် ကစားပွဲနှင့်ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက် တို့တွင် အသုံးပြုသော ယဉ်ကျေးတဲ့လေသံ(formal tone) တို့ကြောင့် ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာများကို အရေးကြီးပုံပေါက်စေပါတယ်။
စကားပြော (၂) (Conversation – 2) အမှားပြင်ဆင်ခြင်း(corrections)
ဒီစကားပြောကိုပဲ ပို ရင်းနှီးပြီး သင့်တော်တဲ့ အာဘော်နဲ့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Tom: ဖရင့် (ခ) (Frank)၊ ဒီနေ့ အခြေအနေဘယ်လိုလဲ? (Frank. How are things today?)
Frank: ကောင်းပါ့။ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာတယ်ကွာ။ အမျိုးသမီးရော ဘယ်လိုလဲ ?။ (Great. Good to seeyou. How’s the wife?)
Tom: နေကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာ မင်း ညနေကျရင် ငါ့ဆီ ခဏ၀င်လာပြီး တစ်ခုလောက် ကူညီပါလား။ (Just fine. Listen, can you pop by the office and give meahand later today?)
Frank: အေးပါ ပြသနာမရှိဘူး။ ဒါနဲ့ ညက ကစားပွဲဘယ်လိုလဲ။ (Sure, no problem.Hey, how about the game last night?)
Tom: မယုံနိုင်စရာပဲကွာ။ ၂-သင်းစလုံး စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်ကစားကြတာပဲ။ (Incredible! Both teams were really on.)
Frank: တကယ့်ကို တော်ကြတာပဲ။တစ်လုံးမှ မလွဲကြဘူး။ (Were they ever! They couldn’t missashot!)
ဒီ ရိုးရှင်းတဲ့ ဥပမာစကားပြော တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် မှန်ကန်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ စကားအသုံးအနှုန်းသည် အခြေအနေကို ကောင်းကောင်း အကဲဖြတ်နိုင်မှုပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။ သဒ္ဒါဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာသာစကားရဲ့ အမျိုးမျိုးသော ပုံစံတွေကို မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဘယ်လို သုံးရမယ်ဆိုတာကို သိထားခြင်းသည် ဆက်သွယ်ခြင်း (communicating) နှင့် ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ခြင်း (communicating effectively) တို့ကို ကွဲပြားခြားနားစေပါတယ်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၁)
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အခြေအနေများနှင့် ဆီလျော်သော ဘာသာစကား - အပိုင်း (၂)
Permalink Reply by Thin Thin Yu on October 24, 2011 at 17:28
Permalink Reply by Ratan Biswas on October 24, 2011 at 19:13
Permalink Reply by Ko Myo Zin on October 24, 2011 at 21:37
Really really thanks for ur articles ....
Permalink Reply by Sandar on October 25, 2011 at 12:27
Permalink Reply by zawzawhtun on October 26, 2011 at 15:32
Permalink Reply by Ye Htut Naung on November 2, 2011 at 21:25
Permalink Reply by Amo Chit on December 10, 2011 at 20:02
Thanks! And I'd really like to see more.
Permalink Reply by Zaw Win on June 11, 2012 at 16:35
Permalink Reply by Myangalish Sayar Kmn on May 6, 2013 at 18:37
Oh' Nice. May I hope the next one.
Permalink Reply by Nant Yin Yin Aung on September 22, 2015 at 14:32